Sheekh Shariif oo digniin culus u diray FARMAAJO - Caasimada Online
Home Warar Sheekh Shariif oo digniin culus u diray FARMAAJO
Sheekh Shariif oo digniin culus u diray FARMAAJO
Muqdisho (Caasimadda Online) – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna hoggaamiyaha Madasha Xisbiyada Qaran Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ka hadlay xaalada siyaasadeed ee dalka, isaga oo eedeyn kulul u jeediyay Madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Sheekh Shariif waxaa uu sheegay in madaxda Dowladda qorshaha ugu jirin inay qabtaan doorasho sidoo kalena aysan daacad ka aheyn heshiis laga gaaro xasaradda siyaasadeed ee u dhaxeysa iyaga iyo dowlad goboleedyada.
Sheekh Shariif ayaa sheegay inaysan ogolaan doonin in aayaha dalka u afduubnaado shakhsiyaad rabo inay kursiga kusii fadhiyaan.
Ugu dambeyn Sheekh Shariif waxaa uu uga digay Guddoonka Golaha Shacabka inay ka fiirsadaan tallaabooyinka aan dastuuriga aheyn ee ay ku dhaqmayaan, iyadoo ujeedka yahay in xil kordhin ay u xallaaleeyaan Madaxtooyada.
Halkaan hoose ka akhriso qoraalka Sheekh Shariif oo dhameystiran